(ဗမာစာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးနှင့် ဗမာနွယ်ဝင်(ဓနု၊ အင်းသား၊ တောင်ရိုးနှင့် ယော)တို့၏ ဇာတိစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့သည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman Languages) ပြောဆိုသည့် လူမျိုးနွယ်စုကြီးမှ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၃၆သန်းခန့်သည် မြန်မာဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံး၍ မြန်မာတိုင်းရင်သားများသည် ဒုတိယဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံးသည်။
၃၃ သန်း (၂၀၀၇)
rki – ရခိုင်ဘာသာစကား ("ရခိုင်")
မြန်မာဘာသာစကားသည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman Languages) အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများ မိသားစု (Sino-Tibetan Languages Family) ထဲတွင် ပါသည်။ မြန်မာဘာသာသည် တက်ကျသံရှိသော (tonal) ၊နိမ့်မြင့်အမှတ်အသားရှိ (pitch-register) ဖြစ်သော၊ ဧကဝဏ္ဏစကားလုံး (monosyllabic) အလွန်များသော ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ကတ္တား-ကံ-တြိယာ စကားလုံးအစီအစဉ်ဖြင့် ရေးသော သရုပ်ခွဲဘာသာစကား (analytic language) လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအက္ခရာများသည် ဗြာဟ္မီအက္ခရာ သို့မဟုတ် ဗြာဟ္မီအက္ခရာမှ ဆက်ခံထားသောမွန်အက္ခရာတို့မှ ဆင်းသက်လာသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး – ဘိတ်စကား၊ ထားဝယ်စကား၊ ပလောစကား
ရန်ကုန်-မန္တလေး တို့တွင် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ပြောဆိုကြသော စံပြု မြန်မာစကားသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတွင် သုံးသော စကားများပင် ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်နှင့် အောက်မြန်မာပြည်ကြားအဓိက စကားကွာခြားမှုမှာ အသံထွက်ကွာခြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ စကားလုံးရွေးချယ်မှု ကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာတီမြစ်ဝှမ်းအတွင်း အသံထွက် ကွာခြားမှု အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ဥပမာ ရဟန်းသံဃာများကို ကပ်လှူသည့် ဆွမ်းကို အထက်မြန်မာပြည်က ဆွမ်း [sʰwáɴ] ဟု စာလုံးပေါင်းအတိုင်း အသံထွက်သော်လည်း အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဆွန်း [sʰʊ́ɴ] ဟု အသံထွက်ပါသည်။ မန္တလေးတွင် ကျား၊ မ မရွေး မိမိကိုယ်ကို "ကျွန်တော်"ဟု ညွှန်းဆို ပြောကြားလေ့ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင်မူ ‘ကျွန်တော်’ကို အမျိုးသားများသာ သုံးကြပြီး အမျိုးသမီးများက "ကျွန်မ"ဟု သုံးနှုန်းသည်။ အထက်မြန်မာပြည်တွင် မိခင်နှင့် ဖခင်ဘက်မှ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ခွဲခြား ခေါ်ဝေါ်နေဆဲ ရှိပြီး အောက်မြန်မာပြည်တွင်မူ သိသိသာသာ ခွဲခြား ထားခြင်း မရှိပေ။ ဥပမာ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ဖခင်၏ အမနှင့် ညီမအား အရီးကြီးနှင့် အရီးလေးဟု လည်းကောင်း၊ မိခင်၏ အမနှင့် ညီမအား ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သည်။
မြန်မာစကား ပြောသူများ၊ အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတွင် နေထိုင်ကြသူများ ကြားတွင် အပြောစကားသည် မှတ်သားဖွယ်ရာပင် ညီညွတ်တူညီသည်။ အဓိကကျသော ပထမအကြောင်းအရင်းမှာ ရိုးရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးစနစ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသည် ပညာရေးကို များစွာ အားပေးပြီး စကားအပြောအဆို အရေးအသားကောင်းမွန် ညီညွတ်အောင် အလေးထား သင်ကြားပေးသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် တစ်ပြည်လုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နယ်မြေအတွင်း အမျိုးသားများ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းများ ထူးခြားစွာ မြင့်မားနေပြီး ၆၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသည်။ စာတတ်မြောက်မှု မရှိသေးသော လူနည်းစုလူမျိုးများရှိရာ တောင်ပေါ်ဒေသအချို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုလျှင် ထိုကိန်းဂဏန်းထက် ပိုမိုများမည်ဖြစ်ရာ ထိုခေတ်အခါအနေဖြင့် အလွန်မြင့်မားသော နှုန်းထားဖြစ်သည်။ ဗမာမျိုးနွယ် ဗမာစကားပြောသူများ အောက်မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်မှာ များစွာ မကြာသေးပါ။ ၁၈ ရာစု အလယ်ပိုင်းအထိ အောက်မြန်မာပြည်တွင် မွန်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး မွန်ဘာသာစကားက လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစကားပြောသည့် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်က မွန်စကားပြောသည့် ဟံသာဝတီပြည်ကို အနိုင်ရရှိပြီးနောက် စတင်၍ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဗမာစကားကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလာကြသည်။ ၁၈၃၀ ခုနှစ်ရောက်သော အခါ ၎င်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ ဟု သတ်မှတ်ပြောဆိုကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အထက်မြန်မာပြည်မှ ဗမာများ ပြောင်း ရွေ့လာခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ကူးပြောင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်သွေးနှောခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဆန်ထုတ်လုပ်မှု အရှိန်မြှင့်လာခြင်း၊ အထက်မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်းများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုမှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။
စာပေဟန် – အမြင့်(မြန်မာစာ) → စာကြီးပေကြီးရေးသားခြင်း၊ သတင်းစာများ၊ အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးစာများ၊ ရုပ်သံ ရေဒီယို သတင်းကြေငြာခြင်း၊ မိန့်ခွန်းပြောခြင်း စသည်တို့တွင် သုံးနှုန်းသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
စကားပြောဟန် – အနိမ့် (မြန်မာစကား) → နေ့စဉ်သုံး စကားပြောဆိုသောပုံစံ၊ သာမာန်ရုပ်သံအစီအစဉ်များ၊ ကာတွန်း/ဝတ္ထုများ စသည်တို့တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောဆိုနေကြသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ စာပေပုံစံသည် သာမာန်အားဖြင့် အသုံးမရှိတော့သည့် ရှေးရိုးဆန်သော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စကားလုံးများ (ဥပမာ – ပစ္စည်း၊ဝိဘတ်၊ နာမ်စား၊ သမ္ဗန္ဓ) ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ အများအားဖြင့် အရေးပုံစံတွင် သုံးနှုန်းနေသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံး တို့သည် မြန်မာစကားပြောပုံစံတွင်ရှိသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံးတို့ဖြင့် လုံးဝ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဥပမာ –
အပြောစကားမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု အဆင့်အလိုက် စကားလုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စကားပြောသူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု စသည့် အနေအထားအရ အရိုအသေပြု ခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို ပြသရန်အတွက် "ပါတယ်"၊ "ပါခင်ဗျ" စသည့် ဝိဘတ် များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ နာမ်စားတွေမှာလည်း အသုံးပုံစံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဆရာ/ဆရာမ၊ အရာရှိ၊ အသက်ကြီးသူ စသည့်သူများအား ခေါ်ဝေါ်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းပုံစံတွေ သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရေးသားတဲ့ အသုံးအနှုန်းများသည်လည်း သာမာန် နေ့စဉ်သုံး စကားပြော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် များစွာ ကွာခြားသည်။
ဤအပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ အသံထွက်သင်္ကေတ (International Phonetic Alphabet) ကိုအသုံးပြုသည်။
ဗျည်းခန့်မှန်း‌ /ɹ/ ရှုားသည်၊ ပါဠိနှင့် သင်္သကရိုက်အသံသုံး၏ နေရာနာမည်၌ ("အမရပူရ" [àməɹa̰pùra̰] လို) ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာလုံး၌ မှအသံထွက်သည်။ မြန်မာစကား၏ /ɹ/ က /j/ ဖြစ်လာသည်။ (သီးခြားစကားမှ /ɹ/ အမြဲသုံးသည်) ပါဌ် /j/ သုံးသည် (ရဟန္တာ /jəhàNdà/ ရာဇ /jàza̰/ လို). တစ်ခါတစ်လေ /l/ ကိုအသံထွက်လို့ရသည် ("တိရစ္ဆာန်" ကို /təɹeiʔ sʰàn/၎င်း /təleiʔ sʰàn/၎င်း အသံထွက်လို့ရသည်). /ʍ/လည်းရှားသည်၊ နိုင်ငံခြားနာမည်မှသုံးသေးသည်။
စလုံးစပ်များ၌ /pʰ, p/ အသံ‌တွေ /b/ လိုအသံထွက်၊ /kʰ, k/ အသံ‌တွေ /g/ လိုအသံထွက်, /tʃʰ, tʃ/ အသံ‌တွေ /dʒ/ လိုအသံထွက်၊ /sʰ, s/ အသံ‌တွေ /z/ အသံထွက်နိုင်သည်၊. အဆုံးပါတဲ့စာလုံး၌ /dʒ/ အသံ /j/ ဖြစ်နိုင်သည်။ သောကြောင့် "အင်္ကျီ" အသံထွက်ရင် /èiNdʒí/ နှင့် /èiNjí/ မှန်သည်။
e o eɪ oʊ
a aɪ aʊ
The monophthongs /e/၊ /o/၊ /ə/၊ နှင့် /ɔ/ ဝဏ္ဏအဖွင့်၌ဘဲပါသည် (syllable coda မပါ၏ဝဏ္ဏ); the diphthongs /ei/၊ /ou/၊ /ai/၊ နှင့် /au/ ဝဏ္ဏအပိတ်၌ဘဲပါသည် (syllable coda ပါ၏ဝဏ္ဏ).
မွန်ဘာသာသည် မြန်မာဘာသာအပေါ် ထဲထဲနက်နက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိသောကြောင့် မွန်ဘာသာမှ မွေးစားထားသော ဝေါဟာရများနှင့် မြန်မာ ဝေါဟာရများကို ခွဲခြားနိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှသည်။ မွန်မွေးစားစကားလုံးများသည် အပင်ပန်းမန်၊ တိရစ္ဆာန်၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အထည်အလိပ်၊ အစားအသောက်၊ လှေများ၊ လက်မှုပညာ၊ ဗိသုကာနှင့် ဂီတတို့နှင့် ဆက်စပ်သည်။
↑ (2013) "Southern Burmish", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
Becker, Alton L. (1984). "Biography ofasentence: A Burmese proverb.", in In E. M. Bruner (ed.): Text, play, and story: The construction and reconstruction of self and society. Washington, D.C.: American Ethnological Society, 135–55။
Bernot, Denise (1980). Le prédicat en birman parlé (in French). Paris: SELAF. ISBN 2-85297-072-4။
Cornyn, William Stewart; D. Haigh Roop (1944). Outline of Burmese grammar. Baltimore: Linguistic Society of America။
Cornyn, William Stewart; D. Haigh Roop (1968). Beginning Burmese. New Haven: Yale University Press။
Green, Antony D. (2005). "Word, foot, and syllable structure in Burmese.", in In J. Watkins (ed.): Studies in Burmese linguistics. Canberra: Pacific Linguistics, 1–25. ISBN 0-85883-559-2။
Okell, John (1969). A reference grammar of colloquial Burmese. London: Oxford University Press။
Roop, D. Haigh (1972). An introduction to the Burmese writing system. New Haven: Yale University Press။
Taw Sein Ko (1924). Elementary handbook of the Burmese language. Rangoon: American Baptist Mission Press။
Wheatley, Julian K. (1987). "Burmese.", in In B. Comrie (ed.): Handbook of the world's major languages. Oxford: Oxford University Press, 834–54. ISBN 0-19-520521-9။
(1989) in Patricia M Herbert, Anthony Milner: South East Asia Languages and Literatures: Languages and Literatures: A Select Guide. University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1267-0။
Waxman, Nathan; Aung, Soe Tun (2014). "The Naturalization of Indic Loan-Words into Burmese: Adoption and Lexical Transformation". Journal of Burma Studies 18 (2): 259–290. doi:10.1353/jbs.2014.0016.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာဘာသာစကား&oldid=517757" မှ ရယူရန်
၃၀ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။